M-HORSE Pure 1 သည်မျက်နှာပြင်ကြီး။ ယူရို ၁၀၀ အောက်သာရှိသည် Androidsis
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာလှပပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုလေ့လာမယ် M- မြင်းစင် 1။ ထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်ခု။ က မျက်နှာပြင်ကြီးများသည်ဘောင်မပါဘဲ နီးပါးလုံးဝက၎င်း၏ရှေ့ panel ကိုယူထားသော။ ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အောက်မှာဘာတွေသိမ်းထားတယ်ဆိုတာသိထားခြင်းကပိုပြီးအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
စျေးကွက်တဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်းသောသတင်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့။ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများသည်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖန်တီးနေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သိသိသာသာလျော့နည်းသောကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအတွင်းသို့ထည့်သွင်းလာသည်။ M-HORSE သည်၎င်း၏ Pure 1 မော်ဒယ်နှင့်အတူခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
1 အလွန်သေးငယ်သောအတွက် M-HORSE PURE 1
4 ကျန်သောအမြင့်တွင် M-HORSE Pure 1 ၏ပရိုဆက်ဆာ
5 Pure 1 သည်အသန့်ရှင်းဆုံးသော Android7တွင်လောင်းသည်
6 M-HORSE Pure 1 ၏ကင်မရာများသည်၎င်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၏အဆင့်တွင်ရှိသည်
7 အသံနှင့်စပီကာများ M-HORSE Pure 1
8 M-HORSE Pure 1 အချက်အလက်ဇယား
9 အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး M-HORSE Pure 1
အလွန်သေးငယ်သောအတွက် M-HORSE PURE 1
ယုတ်စွအဆုံးမိမိ၏ high-end ဝိသေသလက္ခဏာများပါဝင်သောစမတ်ဖုန်းပေါ်လာသည့်အခါအနည်းဆုံးသိလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကား, ဤအမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လက်ဗွေဖတ်သူများနှင့်အတူထိုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့။ စမတ်ဖုန်းအားလုံးနီးပါးတွင်ပါဝင်သောနည်းပညာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသည် နှစ်ခုသော့ချက်ရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။ ။ The ရှေ့ panel ပိုကြီးပြီးပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့၊ y Las ကင်မရာ.
ထိုသူတို့က Apple မှသီးသန့်တိုးတက်မှုမဟုတ်ပေမယ့်, ဝေးကနေ။ iPhone သည်အသစ်အဆန်းတစ်မျိုးမျိုးကိုမွေးစားသောအခါပိတ်ပင်မှုကိုစတင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ထို့အပြင်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်ကြီးကြီးငယ်ငယ်စွာသည်သြဇာအရှိန်အဝါကြီးသည်။ ဒါဆိုငါတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ M-HORSE Pure 1 တွင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပါရှိသည် terminal ကို၏အစွန်းမှအများဆုံးသို့တဟုန်တည်းပြေး။ ထို 5,7 လက်မအရွယ်အစားနှင့်အတူ အများဆုံးသံသယ၏တစ်ချက်ဆွဲဆောင်။
De သတ္တုအလွိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်းသည်တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်ပြီးဆုံးသည်။ ကြည့်ရတာအရမ်းလှတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတွေအတွက်တကယ့်သံလိုက်ကမထိဘဲနီးပါးမှတ်သားထားတယ်။ ကိုယ်ထည်တွင်၎င်း၏ပါးလွှာမှုကြောင့်ထင်ရှားမှုမရှိခြင်းနှင့်၎င်း၏ကွေးသောလိုင်းများသည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အရွယ်အစားနှင့်အတူ။ M - HORSE Pure 1 အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် ပုံမှန်ဖုန်းအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲစရာမလိုပဲတစ် ဦး ပေါင်းစည်း ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင် အများစုထက် ယင်း၏ကိုယ်ထည်အများစုအောင်.
M-HORSE Pure 1 ကိုသမ္မာသတိရှိပြီးရိုးရှင်းသော“ ထုပ်ပိုးမှု” ဖြင့်တင်ပြသည်။ ထုတ်ကုန်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည့်အဖြူရောင်သေတ္တာတစ်ခု။ အတွင်းပိုင်း၌, ငါတို့ foreground အတွက်စက်အပြင်, ရှာပါ။ The USB ကြိုး အားသွင်းခြင်းနှင့်ဒေတာလွှဲပြောင်းသည်။ The Wall charger အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း။ က pin ကဒ်အထိုင်ဖွင့်ရန်။ The အမြန်စတင်လမ်းညွှန် နှင့် အာမခံချက်။ ထိုအယေဘူယျဖြစ်လာသည်နှင့်အလွန်ကြိုဆိုသည်သောအရာ, တစ် silicone အကာအကွယ်လက်။ ကျနော်တို့နားကြပ်ကိုလက်လွတ်ပြောပါ။
သင်၏လက်၌ M - HORSE PURE 1 ၏ခံစားချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်စျေးသိပ်မကြီးသောဖုန်းကိုယူနေခြင်း၏ခံစားချက်မရှိပါ။ ဒါဟာနီးပါးဆန့်ကျင်ဘက်ထွက်လှည့်။ အခြားကိရိယာများထက်အနည်းငယ်ပိုလေးနေမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သတိထားမိသည်။ လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်အရွယ်အစားနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များဖြင့်အထက်ထောင့်သို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခက်ခဲသည်။ ပုံမှန်သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားစဉ်းစား။
၎င်း၏ရှေ့တွင် ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲ အချို့သောအသစ်အဆန်းထွက်မတ်တပ်ရပ်။ အပေါ်ဘက်တွင်အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာ၊ နားကြပ်နှင့်ဘေးကပ်လျှက်ရှိသည် dual-front camera ငါးနှစ်ခု megapixels ။ Selfies သည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်နှင့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းကိုပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြသည်။ အောက်ခြေမှာပေါ်လာ မျက်နှာပြင်ကိုယ်နှိုက်မှာအညွှန်းခလုတ်များ.
အချို့သူများအတွက်ခလုတ်များကိုမျက်နှာပြင်ထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးလေးသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားနှင့်အသုံးဝင်မှုကိုကန့်သတ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ရှိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုမီးမဖွင့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ရှေ့ panel သည်၎င်း၏အလင်းအားလုံးကို screen သို့အပ်နှံသည်။ ဗီဒီယိုကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်သည့်အခါခလုတ်များသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဝှက်ထားကြောင်းသတိပြုပါ။ မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းသည်၎င်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတွင်ထိုတွင်အနှောင့်အယှက်မရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့ဗွီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါသူတို့ပေါ်လာအောင်ဖန်သားပြင်ကိုထိဖို့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်တယ် M-HORSE Pure 1 တွင်စပီကာတစ်လုံးတည်းသာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းအားနဲ့အသံရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအရကောင်းကောင်းညှိထားတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပျက်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲတိုတောင်းသောဝေးကွာသော volume ပမာဏသို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းဘေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂန္ထဝင် USB charging connector ရှိသည်။ နောက်ဘေးမှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်မိုက်ကရိုဖုန်း။
၎င်း၏နှစ်ဖက်တွင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ပါ ညာဘက်ခြမ်း လုံးဝခလုတ် - အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် slot ကအတူ slot က ကဒ်များအတွက် SIM သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်။
Su ညာဘက် အဆိုပါရှိပါတယ် ပါဝါခလုတ်ကိုနှင့်သော့ခတ်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ elongated တ ဦး တည်းနှင့်အတူ။
ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတယ် အသေးစားဂျက်နားကြပ် input ကို.
နောက်ဘက်မှာသတင်းတွေပိုများတယ်။ M - HORSE PURE 1 သည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဟုသတ်မှတ်ထားသည့်အရာအားလုံးနှင့်နီးစပ်မှုအပေါ် ဆက်၍ လောင်းနေသည်။ ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်နိုင်ဘူး၊ သင်၏နောက်ကင်မရာအတွက်မှန်ဘီလူးနှစ်ဆ။ ဒီကိစ္စမှာ ဒေါင်လိုက်တည်ရှိသည် တစ်ခုကျော်ကတစ်ခု။ သင်၏ဘယ်ဘက်တွင်နှစ်ဆကျန်နေသည် LED flah, နှင့်သူ၏ညာဘက်ရန် လက်ဗွေဖတ်စက်.
မျက်မှောက်၌, ဒြပ်စင်သုံးခု၏တည်နေရာသည်အချိုးအစားကိုထိန်းသိမ်းသည် ကောင်းတယ် ဒီဇိုင်နာတွေကလက်ဗွေဖတ်တဲ့အရွယ်နဲ့နှစ်ဆမီးရောင်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကထောက်ပြရန်ရှိသည် လက်ဗွေဖတ်စက်၏တည်နေရာနှင့်အရွယ်အစားသည်စံပြမဟုတ်ပါ။ လက်ဗွေဖတ်သည့်စနစ်နှင့်အပြိုင်ရှိခြင်းနှင့်ကင်မရာနှင့်နီးကပ်စွာရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဗွေရာကိုအကြိမ်များစွာကင်မရာမှန်ဘီလူးသို့သွားစေသည်
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမလွတ်သွားဘဲအရာရာဖြစ်သင့်တဲ့နေရာဖြစ်ပုံရသည်။ ယခုအချိန်အထိ M - HORSE PURE 1 သည်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်း နောက်ကျောအပေါ်ကွေးဒီဇိုင်း, အချိုးကျချောနှင့်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုဤအပိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောတန်းကထိုက်တန်ပါစေ။ သို့သော်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမျှသာလော။
၎င်း၏တောက်ပသောသတ္တုချောများ၊ မျက်နှာပြင်၏အဖြစ်များမှုနှင့်မျက်နှာပြင်၏ထည့်သွင်းမှုနှင့်အညီအဝိုင်းအစွန်းများသည်ထူးဆန်းသည့် terminal ကိုအလွန်ပင်ဆင်တူသည်။ လက်ဗွေဖတ်စက်၏တည်နေရာနှင့်လျှပ်တစ်ပြက်ပင်။ နောက်ဆုံးပေါ် Samsung Galaxy မော်ဒယ်လ် S1 နှင့် S7 အကြား M-HORSE Pure 8 ကိုကျွန်ုပ်တို့ထားရှိသည်။ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တူညီမှုလား
ကျနော်တို့ကင်မရာမှန်ဘီလူးဝန်းရံသောသတ္တုဘောင် Galaxy S7 ကနေအချို့သော "လှုံ့ဆော်မှု" ယူပုံကိုကြည့်ပါ။ သို့သော် Flash ၏တည်နေရာနှင့်လက်ဗွေဖတ်သူများအတွက်၎င်း၏စံပြနမူနာမှာ Galaxy S8 ဖြစ်သည်။ အလားတူသို့မဟုတ်မဟုတ်သည်မှာသေချာသည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောပြီးပြည့်စုံသောစမတ်ဖုန်းကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်အခါအနည်းဆုံးဒီဇိုင်းပိုင်းအရအမြင့်ဆုံး "ထိပ်တန်း" စမတ်ဖုန်းများကိုမငြူစူနိုင်ပါ။
ဦး စားပေး၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုအထူးပြုလုပ်သောကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်နှင့်၎င်းကိုမရေမတွက်နိုင်သောဖုန်းများပေါ်တွင်ထင်ရှားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းများ၏အကန့်အသတ်ကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် M-HORSE Pure 1 ကိုတန်းတူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအရာမရှိပါ။ ၎င်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်လက်မသည်၎င်းကိုမြေပုံပေါ်တွင်တင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်များထက် ပို၍ အရောင်တောက်စေသည်။
una ထောင့်ဖြတ် 5,7 လက်မနှင့်အတူ Infinite IPS LCD မျက်နှာပြင် ရှေ့မျက်နှာပြင်၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုရယူသည်။ ထေိုအချိုး 86% terminal ကို၏ရှေ့မှောက်၌။ အဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်း 1440 x 720 px resolution နှင့် မျက်နှာပြင်ပုံစံ 18:9ပို။ ပို။ ကျယ်ပြန့်။ နှင့်အတူ တစ်လက်မသိပ်သည်းဆနှုန်းမှာ 282 pixels ကို။ တည်ဆောက်ထားသည် ကွေးကောက်ပြီး 2.5 D "GFF အပြည့်အဝ lamination" နှင့်အတူဖန်ခွက်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် M-HORTE Pure 1. မျက်နှာပြင်၏စည်းကမ်းချက်များကိုအနည်းငယ်မျှတောင်းခံနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင်ခေါင်းစဉ်dရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူစျေးကွက်အပေါ်စျေးအသက်သာဆုံးစမတ်ဖုန်း။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အချိုးအစားမညီမျှမှုကြောင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိသောကိုယ်ထည်တစ်ခုတွင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုတပ်ရန်စီမံနိုင်ခြင်းအတွက်ကိန်းပြည့်များများရနိုင်သည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးစီးရီးများကိုကြည့်ရှုခံစားရန်စမတ်ဖုန်းကိုသင်ရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယင်း ပုံရိပ်အရည်အသွေး၊ အရောင်တောက်ပမှုနှင့်အရောင်အသွေးပြတ်သားမှုရုပ်မြင်သံကြားရှေ့တွင်ထိုင်ရန်အချိန်မရှိသော်လည်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုလက်လွတ်မခံလိုသူများအတွက်၎င်းသည်အရွယ်အစားအနေဖြင့်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်စေသည်။ မျက်နှာပြင်၊ M-HORSE Pure 1 သည်အလွန်ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ကျန်သောအမြင့်တွင် M-HORSE Pure 1 ၏ပရိုဆက်ဆာ
ငါတို့နှင့်အလွန်ရင်းနှီးသော CPU ကိုတွေ့သည်။ The MediaTek 6737 ပရိုဆက်ဆာ LG, MEIZU သို့မဟုတ် Motorola ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှသူတို့၏စက်ပစ္စည်းများ၌အသုံးပြုထားသောကြောင့်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ က Quad-Core 1.3 GHz စမတ်ဖုန်းကို solvency နဲ့အလုပ်လုပ်စေပြီးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကအရည်ပျော်ပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်။
အမှတ်တရများနှင့် ပတ်သက်၍၊ 3G RAMခ။ ထုတ်လုပ်သူနည်းပါးလာခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူနည်းသောကြောင့်ဤအတိုင်းအတာကိုအနိမ့်ဆုံးအစမှတ်ဟုမယူမှတ်ဘဲတန်ဖိုးထားသင့်သည်။ နှင့်စပ်လျဉ်း သိုလှောင်မှု, M-HORSE Pure 1 အင်္ဂါရပ်များ 32 GB ကို။ ထို့အပြင်မလုံလောက်သည့် 16 GB နောက်ကွယ်မှအများစုသည်ယခင်ကထိုကွန်ပျူတာများကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
သိုမဟုတ်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုအခြားကဒ်ထပ်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဒီစမတ်ဖုန်းဟာသူ့ရဲ့ပရိုဆက်ဆာတွေသိုမဟုတ်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကြောင့်ထူးခြားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားစာရွက်ပေါ်တွင်ရှိသောအခြားစွမ်းအားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှမအောင်မြင်ပါ။ ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအလွန်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်.
ဤပရိုဆက်ဆာများ၏လည်ပတ်မှု၏ထူးခြားသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာအခြားသူများနှင့်ဖြစ်ပျက်သည့်အရာနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာ၏အပူလွန်ကဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲသည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားသောဂိမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ H-HORSE Pure 1 သည်သင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များအတွင်းတွင်၎င်း၏ရလဒ်သည်ရှုထောင့်အားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။
Pure 1 သည်အသန့်ရှင်းဆုံးသော Android7တွင်လောင်းသည်
Android နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုရှိပါက၎င်းကိုဖန်တီးသူများ၏ယူဆချက်အရ၎င်းကိုယ်တိုင်သည် Android ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကြိုက်အလွှာများကိုမည်မျှနှစ်သက်သည်ကိုတစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော software သည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နှေးကွေးပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်ပတ်နေသည့်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီကိုပြုလုပ်ရန်သီးသန့်နီးပါးပconိသန္ဓေယူထားသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါတလေဘယ်တော့မှသုံးမှာမဟုတ်တဲ့ application တွေရှိအောင်အတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။
El M-HORSE Pure 1 သည်မလိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများကို Android 7.0 တွင်မထည့်ရန်ရွေးချယ်သည်။ ဤရွေ့ကား, ဒီဆက်ဆက်က၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ချွတ်ချေ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာဓကတစ်ခုကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အရည်အချင်းကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ software ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့စမတ်ဖုန်းရဲ့အပြုအမူဟာတတ်နိုင်သလောက်အရည်ပျော်နိုင်တာကိုနားလည်တဲ့သုံးစွဲသူတွေပါ။
ထိုကွောငျ့, ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ခွင့်ပြုသမျှဖြစ်နိုင်သမျှ configurations မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင် Android ကိုသိလျှင်၎င်းသည်အခြား Android စက်များကဲ့သို့လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သောဂူဂဲလ် မှလွဲ၍ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော application တစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့ပါ။ ပညာရှိရွေးချယ်မှုတစ်ခု
M-HORSE Pure 1 ၏ကင်မရာများသည်၎င်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၏အဆင့်တွင်ရှိသည်
ကင်မရာအပိုင်းသည်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူဤစမတ်ဖုန်းတွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဖန်တီးထားတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းရဲ့အစမှာငါတို့ပြောခဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟာမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊ visor တွေကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ကင်မရာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတယ်။ M-HORSE Pure 1 သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများနှင့်ပူးပေါင်းလိုသည်.
ထိုမင်းသည်ကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်ကြောင့်။ ဒီကိရိယာမှာ Sony မှလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရှေ့ကင်မရာ။ မြင်ကွင်းအထက်တွင်တွေ့ရသည့် dual လည်းကင်မရာဟုခေါ်သည် နှစ်ချက် Selfie ကင်မရာ။ ဒီကိစ္စမှာငါတို့ပြောနေတာ နှစ်ခုသည် ၅ megapixel နှင့်5megapixel sensor များဖြစ်သည်။ သင်၏ selfie အားအလွန်အကျွံတောင်းဆိုမှုများကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုအကြောင်းပြောမည့်ကင်မရာအပလီကေးရှင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ selfie သည်အဆင့်အသစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
selfie ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင်သဘာဝအလင်းဖြင့်အိမ်တွင်းအလင်းရရှိမှုအသေးစိတ်သည်မည်မျှရှိသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ မျက်နှာအသွင်အပြင်၊ အသားအရေနှင့်အတိမ်အနက်ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အလွန်ကောင်းသောကင်မရာရှေ့တွင်ရှိနေသည်။
ထဲမှာ နောက်ကင်မရာM-HORSE Pure 1 သည်ရှေ့တွင်ရှိသကဲ့သို့၊ dual-lens, Sony ကိုလည်းထုတ်လုပ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာ CMOS အမျိုးအစား ကြောင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိပါတယ် 8 megapixels နှင့်2megapixelsအသီးသီး။ focal aperturef/ 2.0နှင့် နှစ်ဆ LED flash ကို အနိမ့်အလင်းအခြေအနေများသည်။ အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရယူရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများအတွက်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူ။
ကင်မရာမှာရှိတယ် တိကျသော autofocus ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကနေစမတ်ဖုန်းကိုချဉ်းကပ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာငါတို့သတိထားမိမှာပါ။ အိမ်ပြင်ထွက်နှင့်သဘာဝအလင်း၌ကောင်းသောရလဒ်များနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသောအရောင်များနှင့်ကောင်းမွန်သောအနက်အဆင့်ကိုကမ်းလှမ်းသောဖမ်းယူမှုများရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးအတွက် လှုပ်ရှားမှုအတွက်ယူပါကားနဲ့လည်ပတ်နေတာ၊ autofocus အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါအကောင်းဆုံးငါးခုကိုရွေးပါပြီ။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံစွာဖော်ထုတ်ထားသည့်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသောအရာဝတ္ထုကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ပုံကိုချဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကအရမ်း pixelated ဖြစ်လာသည် အလွန်မကြာမီအရည်အသွေးလျော့ကျသွားသည်။
အလားတူပင်တစ် ဦး နှင့်အတူ မလှုပ်နိုင်သောရှုခင်းဓာတ်ပုံလုံးဝဖမ်းယူကမ်းလှမ်းမှု ကောင်းသောအရောင်များ။ ဒါပေမယ့်ကြည့်ရတာပေါ့ အသေးစိတ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဆင့်ကိုအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်ချဲ့ထွင်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်အမှုအရာလည်းပိုဆိုးလာ။
အင်္ဂါရပ်တွေ နှစ်ဆဒစ်ဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူး လုံလောက်သောတိုကျရိုကျထိတွေ့မှုလျော်ကြေးငွေနိုင်စွမ်း။ သို့သော်၎င်းကိုတူညီသောအနေအထားမှအမြင့်ဆုံးသို့သက်ရောက်စေခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရှိ pixelation နှင့် noise ကိုထင်ရှားစေသည်။ ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးရိုက်ကူးခြင်းတွင်အသစ်အဆန်းမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်ရန်နေရာများစွာရှိပါသည်။
ရိုက်သည် ဆက်လက်နေသော သို့မဟုတ်ကွဲ။ မျက်နှာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊။ ကျနော်တို့တောင်မှစိတ်ဝင်စားဖို့စေနိုင်သည် မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများ။ အဆစ်အနည်းငယ်သိသာသော်လည်းပြင်ပမှအသုံးချစရာမလိုဘဲဤအမျိုးအစားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ နှင့်ရရှိသောရလဒ်အတော်လေးကောင်းလှ၏။
ထို့အပြင်လယ်ပြင်၌အများဆုံးသင်ယူဘို့လည်း ကျနော်တို့ကပိုပရော်ဖက်ရှင်နယ် settings ကိုရှိသည်။ M-HORSE Pure 1 နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျော်ဖြေရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် HDR ဓါတ်ပုံများ။ ရွေးချယ်ရန် manual setup အတွက် ISO သို့မဟုတ် white ချိန်ညှိချက်များ။ Self-timer ကိုသုံးပါ၊
သူတို့ဟာဒီကင်မရာတွေထဲကတစ်နည်းနည်းနဲ့အကျိုးအရှိဆုံးရအောင်စီစဉ်ထားတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေလိုပဲပုံရသည်။ သို့သော်၊ သင်ရွေးချယ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများမလုံလောက်သေးပါက၊ ကင်မရာအက်ပ် သငျသညျလညျးအခြားရွေးချယ်စရာရှိလိမ့်မည်။ The အလှအပပုံစံ၎င်းသည်အသားအရေကိုညင်ညင်သာသာဖြူဖွေးစေနိုင်သည်။ ပါးလွှာသောမျက်နှာပြင် (သို့) မျက်လုံးအရွယ်အစားကိုပင်ချဲ့ပါ။
ဒီ M-HORSE Pure 1 ရှိကင်မရာများသည်အဝေးမှသာအနိုင်ရရှိသည်။ အနီးကပ်ရိုက်ကူးမှုတွင်သူတို့ရရှိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့်မပါဘဲရှုခင်းဓါတ်ပုံများ၏ခံစားချက်ကိုများစွာပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
တောင်မှအတွက် အလင်းနည်းသောအခြေအနေများ, အနီးကပ်အကွာအဝေးမှာယူဓာတ်ပုံများကောင်းသောရလဒ်များကိုပေး။ ဤကိစ္စတွင်, flash ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် auto option ကိုရွေးချယ်။ အနည်းငယ်အတုအလင်းနှင့်တကွ, ရလဒ်ကယ့်ကိုကောင်းလှ၏။
ဖန်သားပြင်ကြီးများပါသည့်ဆိပ်ကမ်းများအကြောင်းပြောတိုင်းမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုသည်မြင့်မားသည်။ နှင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution ပါရှိသည့် terminal တစ်ခု၏ရှေ့တွင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုသည်မြင့်မားသည်။ ဤအတွက်၊ M-HORSE ၏သူငယ်ချင်းများသည် Pure 1 အားရက်ရက်ရောရောဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည်။ ၄,၃၈၀ mHz သည်အားသွင်းစရာတစ်ခုတည်းဖြင့်တစ်နေ့လုံးအသုံးပြုရန်အာမခံသည်.
သာမန်နေ့ရက်တစ်ခုစတင်ခြင်း အပြည့်အဝဝန်နှင့်အတော်လေးမြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အတော်လေးကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp နှင့် Telegram ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်များထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းဖြင့်“ အတော်လေးမြင့်မားသော” အသုံးပြုမှုကိုနားလည်ပါ။ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုအချို့ယူပါ။ Spotify နှင့် Netflix ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်တေးဂီတကိုဖွင့်သည်။ အရာအားလုံးနှင့်အတူ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဘက်ထရီနှင့်အတူတစ်နေ့နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာသည်.
Smartphone ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းမွန်စွာကောင်းမွန်စွာထားခြင်းက၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသည်မှာသေချာသည်။ ဒါ့အပြင်အိမ်ကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲအိမ်အပြင်ကိုထွက်သွားစရာမလိုပါဘူး၊
အသံနှင့်စပီကာများ M-HORSE Pure 1
bluetoth စပီကာများသို့မဟုတ်နားကြပ်များကဲ့သို့တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်အသုံးအဆောင်များမှာ ပို၍ များပြားလာသည်။ ကိရိယာ၏စပီကာကိုသူတို့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းစာရင်းဖွင့်ရန်သူများရှိနေသေးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်း၏စပီကာများကိုဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်လည်းစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဒီ M- မြင်း၏စပီကာ အသံကျယ်ပြီးရှင်းလင်းတယ် နီးပါးမည်သည့်အသံနှင့်အတူ။ ၎င်း၏အကြီးမားဆုံး "အားနည်းချက်" မှာစပီကာတစ်ခုတည်းတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအရာကိုသည် 'mono' အသံ။ ၎င်းတို့သည်တေးဂီတကိုပုံမှန်နားထောင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်၌ဗီဒီယိုများနှင့်အော်ဒီယိုများကိုကောင်းစွာပြုလုပ်သော်လည်း။
အသံအရည်အသွေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ M-HORSE မှယောက်ျားများသည်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်ရရှိခဲ့သည်။ ဘေ့စ်အသံဘယ်လောက်မြန်သလဲ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်အသံအတိုးအကျယ်ဖွင့်ထားသည့်မည်သည့်ပုံပျက်မှုမျှမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ စတီရီယိုအပြင်အခြားအသံထုတ်လွှတ်မှုများမှပေးထားသောကန့်သတ်ချက်များနှင့်လည်းကောင်းသောအလုပ်အကြောင်းပြောနိုင်သည်။
အသံကိုစပီကာဖြင့်စမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၄ Super Bowl တွင်ဘရူနိုမားစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအသံအမျိုးမျိုးအားလုံးနှင့်အတူစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ သံစုံတီးဝိုင်း, ဒေသန္တရနှင့်ဗုံများ, အသံ, DJ, နှင့်ကြီးသောပတ်ဝန်းကျင်အသံ။ ရလဒ်ကကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကစပီကာနှစ်လုံးကိုပြောခဲ့ရင်ပိုကောင်းသွားမှာပါ။
အထူး ကောင်းသောအသံပမာဏ၊ အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစပီကာနှစ်လုံးပါ ၀ င်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်။ သို့သော်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ပိုမိုအရေးပါသောအခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်မည်ဟုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။
အလားတူစွာငါတို့သည်လည်းရှိသည် ၎င်း၏ FM ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ၌ပါ ၀ င်မှုအတွက်ဆက်လက်လောင်းခြင်းအတွက် M-HORSE အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တေးဂီတကိုဖွင့်ရန်၊ သို့မဟုတ် streaming ဖြင့်နားထောင်ရန်မရေမတွက်နိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များရှိနေသေးသည်။ လေလှိုင်းများပေါ်တွင် zaping အနည်းငယ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းကိုအချိန်မရွေးနားထောင်ခြင်းသည်အမြဲကောင်းပါသည်။ သော်လည်း ၎င်းကိုညှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Pure 1 မပါဝင်သည့်နားကြပ်များကိုအသုံးပြုရမည်။
M-HORSE Pure 1 အချက်အလက်ဇယား
ပုံစံ စင်ကြယ်သော 1
လွှတ်ပေး အောက်တိုဘာ 2.017
စီပီယူ 6737 Ghz တွင် MTK 1.3 Quad Core
ROM မှတ်ဉာဏ် ၃၂ ဂစ်
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7.0
ဖန်သားပြင် Resolution 5.7 x 1440 ရှိသော ၅.၇ လက်မ IPS FHD
ရှေ့ကင်မရာ Sony ၏ dual-lens5Mpx +2Mpx ရှိသည်
နောက်ကင်မရာ Sony 8 Mpx +2Mpx dual lens
ထောက်ပံ့ပုံစံများ BMP / GIF / JPEG / JPG / PNG ဓါတ်ပုံများ - AAC / MP3 တေးဂီတ - 3GP / MP4 ဗီဒီယိုများ
ဘက်ထရီ ဖြုတ်။ မရသော - စွမ်းရည် ၄၃၈၀ mAh ဖြစ်သည်
ရှုထောင့် 73 152.79 9.8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 0.2040 ကီလိုဂရမ်
ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် M-HORSE Pure 1 ကိုဤနေရာတွင်ဝယ်ပါ
ဤတွင် Pure 1 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတရားဝင် M-HORSE ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး M-HORSE Pure 1
ဒီစမတ်ဖုန်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါ ကျနော်တို့ကောင်းစွာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထင်မြင်ချက်ကိုရနိုင်သည် ဘယ်မှာထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်အဘယ်မှာတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းအပေါ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူနိုင်သောစျေးနှုန်းကိုကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းမြင်မှုကိုသာပြောနိုင်သည်။ ငါတို့သည်ဤရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥပမာတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူရိုတစ်ရာမပြည့်သောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်၊ အရည်ပျော်လွယ်။ လှပသောစမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်နိုင်သည်.
ပြောတာကဖုန်း၏ရှုထောင့်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ မရရှိလျှင်ပိတ်ပါနှင့်သွားကြကုန်အံ့။ ဒါကြောင့် M-HORSE Pure 1 ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြင်မှာ“ အကောင်းဘက်” နဲ့“ အားသာချက်များ” လို့ခေါ်တဲ့စာရင်းငယ်လေးခုကိုလုပ်တော့မယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်၊ ၎င်း၏စျေးနှုန်း။ အနည်းငယ်သာဤမျှလောက်များအတွက်ဤမျှလောက်ပူဇော်ရာယဇ်၏ဝါကြွားနိုင်ပါတယ်။ အလွန်မြင့်မားတဲ့အလယ်အလတ်အကွာအဝေးခံထိုက်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတစ် ဦး ကစမတ်ဖုန်း။ အဘယ်သူ၏စျေးနှုန်းထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းစမတ်ဖုန်းထက်အခြေခံဖုန်းများပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ။ ရှင်းပါတယ် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းသည်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ နှင့်မျက်စိ - ဖမ်းမိ။ ရုံနှင့်အတူသကဲ့သို့ ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေး ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်စျေးပေါသောဖုန်းတွင်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအချောသပ်သည်အပြည့်အဝနားလည်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဝေဖန်ခြင်းလည်းမပြုနိုင်ပေ။ ၎င်း၏ကွေးကောက်လိုင်းများသည်မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ဘက်နှစ်ခုစလုံးတွင်၎င်းကိုအထင်ရှားဆုံးသော "စျေးနှုန်းချိုသာသော" စမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြသ။ ဤစျေးနှုန်းအကွာအဝေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစားရှိသည့်ဖန်သားပြင်များအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ တစ် ဦး ပြသမှု 5,7 လက်မ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတွင်ပင်ထင်ရှားပေါ်လွင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် device ၏ panel ထဲသို့ပေါင်းစည်းထားသည့်အရာသည် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည့်ကိုယ်ထည်ကိုမပြောင်းလဲဘဲကောင်းမွန်စေသည်။ Pure 1 ၏မျက်နှာပြင်နေရာသည်အချိုးအစားမြင့်မားသောစမတ်ဖုန်းများစွာကိုကျော်တက်သည်။
သူတို့၏ ကင်မရာ။ အနောက်နှင့်ရှေ့ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဘက်အမှတ်အသားများဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုလုံးတွင် dual-lenses ရှိသည်။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ထိုကဲ့သို့စျေးသိပ်မကြီးသောကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်ဖော်ပြခြင်းသည်ထူးဆန်းကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။
ရေဒီယို။ ရေဒီယို tuner များထည့်သွင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲကြိုဆိုပါတယ်။ အချို့သူများလုံးဝဖယ်ထုတ်လိုက်သောအရာတစ်ခုခု သို့သော်၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်ဖုန်းများပြောင်းလဲချိန်တွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အရာဖြစ်လာရန်အထိအရေးကြီးသည်။
ဘက်ထရီ။ မျက်နှာပြင်များများစွာရှိသောစက်ပစ္စည်းသည်အကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါ Pure 1 ကပြုတော်မူပြီ။ ၄၃၈၀ mAh ဘက်ထရီဖြင့်ဤဖုန်းသည်တက်ကြွသောနေ့ကုန်ဆုံးသည်အထိမည်သည့်ပြwithoutနာမျှမရှိဘဲဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ အားသွင်းစရာမလိုပါဘူး။
အလေးချိန်။ ၎င်းသည်ဖုန်းနှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာလက်၌မိုးသည်းထန်စွာရရှိသွားတဲ့။ ၎င်းကိုအခြားလက်ရှိဆိပ်ကမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တောင် ပို၍ လေးလံသည်။ ဒါဟာထည့်သွင်းကြောင်းမှန်သည် တစ် ဦး ရက်ရက်ရောရောဘက်ထရီဒါပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ဆင်ခြေမဟုတ်ပါဘူး.
အထူ။ အလေးချိန်ရှိသကဲ့သို့ M-HORSE Pure 1 သည်ပုံမှန်ထက်ပိုထူသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၎င်း၏ဘက်ထရီသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဒါမှမဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများ၏တည်နေရာအများဆုံးတိကျသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့စမတ်ဖုန်းက ၀ မ်းသာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ပို။ ပင်ဒါဆိုငါတို့ silicone အဖုံးကိုတင်တဲ့အခါ။
မင်းရဲ့စပီကာ။ အသံကဏ္sectionတွင်စပီကာသည်ကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးတွင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည် စပီကာတစ်ခုမှပေးထားသော mono အသံသည်အခြားတစ်ခုကိုထည့်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်နိုင်သည်.
အလွယ်တကူ 'ညစ်ပတ်' 'မျက်နှာပြင်။ ဒါဟာသတ္တုသို့မဟုတ်တောက်ပချောနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းအားလုံးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်။ ကြည့်ရတာညစ်ပတ်လာပုံရတယ်။ နောက်ကျောတစ်ခုလုံးတွင်ခြေရာများနှင့်ခြေရာများပိုမိုပြည့်နှက်နေသည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကအပေါ်အိုးအိမ်နှင့်အတူဖြေရှင်းကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်သော်လည်း။
La သင်၏ကင်မရာများ၏ resolution။ တရုတ်ဆိပ်ကမ်းများတွင်၎င်းစျေးနှုန်းနိမ့်သောကြောင့်အရည်အသွေးနိမ့်သည့်ကင်မရာများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပါ။ အချို့သောကင်မရာများကိုအထွေထွေအပြုအမူဖြင့်ရိုက်နှက်သောအခါကန့်ကွက်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ရှုခင်းဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဝေးကွာသောအရာဝတ္ထုများရှိ resolution သည်အသေးစိတ်များစွာဆုံးရှုံးသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုကျယ်လာတဲ့အခါမှာတော့ pixelation ဟာမကြာခင်မှာပဲထင်ရှားလာပါပြီ။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင် M-HORSE Pure 1 ဟာကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေထုပ်ပိုးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအလောင်းအစားဖြစ်ပြီးငွေနှင့်မတူနိုင်သည့်တန်ဖိုးများအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုများစွာကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်စျေးပေါသောပစ္စည်းကိုမတွေ့ရဟုငါထင်သည်။ ၎င်း၏ဖန်သားပြင်၊ ကင်မရာများနှင့်ဒီဇိုင်းသည်၎င်းကိုတည်ရှိသည့်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုအရှုံးမပေးလိုပါက Pure 1 သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
M- မြင်းစင် 1
ဓာတ်ပုံ resolution နှင့်အသေးစိတ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » M-HORSE စင်ကြယ်သော 1 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ထိပ်တန်း 10 အက်ပ်များ 2017